Shabaab oo Askar kaqoraneyso Gudaha Kenya iyo Dowlada Kenya oo ka calaa cashay - iftineducation.com
Shabaab oo Askar kaqoraneyso Gudaha Kenya iyo Dowlada Kenya oo ka calaa cashay
aadan21 / March 15, 2012
iftineducation.com – Saraakiil u hadlay dowladda Kenya ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in ay aad u badan yihiin dhalinyarada Shabaab ku biiraya ee ka tagaya dalka Kenya.
Afhayeen u hadlay wasaarada aminga dowladda ayaa sheegay in ay jiraan tiro badan oo ah dhalinyarada reer Kenya in ay ku biiraan Shabaab-ka dagaalama Soomaaliya.
Warbixin dhawaan ay soo saartay QM ayaa lagu sheegay in Al-Shabab uu qortay dhalinyaro reer Kenya oo tiradoodu gaarayso ilaa 500, uwaas oo tabaar iyo dagaal u tagay Somalia, tababarka ka dibna isu diyaariya sidii ay Kenya gudaheeda weeraro uga fulin lahaayeen.
Shabaab ayaa la sheegay in ay kordhisay dhalinyarada ay ka qortaan Kenya lixdii bilood ee la soo dhaafay, waxana dalka Kenya ka dhacay weeraro kuwaas oo ay ku dhinteyn dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmayn.
Kenya waxa ay ku eedeesay weeraradaas in ay ka dambeeyaan Al-Shabaab oo dhawaan la midoobay Al-Qaacida.
Dhawaan, Ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya waxa uu iska Fogeeyay in ay ka dambeeyen weeradii sabtidii lagu qaaday goob laga raaco basaska oo ku taala caasimada Kenyan ee Nairobi, taas oo ay ku dhinteynugu yaraan lix qof.
War saxaafadeed ay soo sareyn ayaa lagu sheegay weerarkaas in aysan Shabaab ka masuul ahayn.
Wasiirka Amniga Gudaha George Saitoti ayaa ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab in ay ka dambeeyen, wuxuuna shegay bamka in uu ahaa afar kuwaas oo laga soo tuuray gaari maraayay goob mashquul ah oo Basaska laga raaco.
Al-Shabaab horrey ayey ugu digtay Kenya markii ciidan ay u soo dirtay Soomaaliya.
Booliska Afar qof ayey u qabteyn in kastoo damiin lagu siidaayay. weerrar oo ay ku dhaawacmeyn in ka badan 60 qof.
“Al-Shabab weerar Bambaano kuma weerarin Nairobi,” sidaas waxa wakaalada wararka AFP u sheegay Sheikh Maxamed Ibrahim, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Isagoo sii raaciyay” annaga kuma lug lihin weerada noocas oo kale iska fudub”
Al-Shabaab waxa ay dhawaan cajalad muuqaal ah soo galiyen Internetka waxa ka muuqday saraakiil Kenyana oo laga soo afduubtay bishii January soohdinta Kenya.
Madaxweyne ku xigeenka Kalonzo Musyoka oo ku booqday dhaawacyada isbitaalka ayaa ku baaqay in xaalada la dajiyo.
Wuxuu sheegay ” Weerarkan lagu qaaday dadka in uusan soo laaban doonin, waana la iska difaaci doonaa argagixisada,” Mr Musyoka ayaa u sheegay saxaafadda markii uu booqday isbitaalka Kenyatta hospital oo la dhigay dadka dhaawaca qabay.
Al-Shabab waxa ay maamulaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxana ay hadda dagaalo dhowr waji kula jitaan AMISOM, dowladda KMG ah, Kenya iyo Ethiopia.
Seynab Laba Dhagax oo 21 Sano Kadib Muqdisho Tagtay (Daawo Sawiro).
Baaritaan: Kalinimada Waa Virus Qarsoon Oo Dadka La Qaadsiin Karo!